4 sosona malefaka PC flex board China Manufacturer
Description:Express Rense-flex PCB,Ramatoa malefaka marefo PCB,Mihodina PCB haingam-pandeha haingana
Home > Products > PCB matevina > 4 sosona malefaka PC flex board
4 sosona malefaka PC flex board
PCB 4 matevina vita amin'ny lamba kely 4 namboarin'ny Storm Circuit andro vitsy lasa izay.
Biraim-paritra vita pirinty Rigid-Flex dia tabilao PCB mampiasa tambazotra maoderina sy teknolojia board.Many mpamorona PCB rehetra tsy mahalala ny hamolavola ny PCB matevina, na tsy mahafantatra izay fampahalalana ilainao amin'ny mpamatsy PCB. Manana drafitra famolavolana marefo marefo PCB eto ianao dia mety hanampy anao izany. Ny mpanamboatra PCB dia tsy maintsy manome anay ny hodi-doko matevina sy ny sombin-doko matevina, raha misy fandefasana hanehoana ny santimetatra tsirairay / PP, izay manampy betsaka anay.
Namboarin'oritra vita amin'ny vata malefaka fihenam-bidy indroa roa izahay, mavokely 1,6mm ary ny ampahany matevina dia 0.15-0.2mm.
3.Thickness: 1.0mm + 0.16mm
6.Mini sakany / habaka: 0.13mm / 0.13mm
Express Rense-flex PCB Ramatoa malefaka marefo PCB Mihodina PCB haingam-pandeha haingana Rb-Rense-Flex PCB Express 2 Layer PCB Express 2 Day PCB Express ENEPIG PCB Green Rigid-Flex PCB